Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland oo isku raacay in xilka laga qaado C/weli Gaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland oo isku raacay in xilka laga qaado C/weli Gaas
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, waxa ay isku raaceen in xilka laga qaado madaxweynaha maamulkaasi C/weli Maxamed Cali Gaas.
Kulanka xildhibaanadaan oo ahaa mid qarsoon ayaa ka dhacay mid kamid ah hoteellada ku yaalla magaalada Garoowe, waxayna xildhibaanadaan tiro ahaan gaarayeen 20.
Qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland ee mooshinka ka wada C/weli Gaas, ayaa iyaga oo ka gaabsaday magacyadooda waxay u sheegeen warbaahinta Bulshoweyn, inay uruurinayaan guntan xildhibaano ah, kuwaasi oo mooshinka xoojiya.
Waxay sheegayaan xildhibaanadaan in Gaas uu ku takri-galay hantida qaranka, sidoo kalena uu gabay dhammaan shaqooyinkii loo igmaday, isaga oo howshiisa kusoo koobay dalxiis waa sida ay hadalka u dhigeenne.
Waxay xildhibaanadaan tilmaameen in aysan intaan kadib adkeysan doonin oo xilka laga qaadayo C/weli Gaas, lana aqbali doonin markaan marmarsiyo dambe.
Si kastaba ha ahaatee, marar badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland waxa ay ku fashilmeen inay mooshin ka keenaan C/weli Gaas, iyadoo mar walbo oo ay is soo abaabulaan koox xildhibaano ah la kala dhantaalayay.